Ho fiarovana ny indostria alemaina, nilaza ny politika goavana nofaritan’ny fanjakana any an-toerana i Peter Altmaier, minisitry ny Toekarena. Tsy dia mahazatra an’ity firenena ity loatra ny fanelanelanana ataon’ny fanjakana amin’ny fandraharahana, saingy noho ny indostria any an-toerana mampiasa olona fito tapitrisa, tsy maintsy miatrika fanovan-drafitra ry zareo, indrindra koa noho ny fivoaran’ny teknolojia sy ny fanavaozana maro.
Tsy azo ialàna i Sina eo amin’ny varotra iraisam-pirenena, araka ny fivorian’ireo Antenimieran’ny varotra (Chambers’Day) maro natao tany Genève, ny herinandro lasa teo. « Tsy azo ambaniana i Sina », hoy i Vincent Subilia, talen’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria any Genève. Inona ny azon’ny Antenimieran’ny varotra hanampiana ireo mpandraharaha? Betsaka ihany koa ireo mpandraharaha nametraka fanontaniana tamin’io fotoana io. Ma ro ny Antenimieran’ny varotra miara-miasa amin’i Soisa: Frantsa, Italia, Angletera, Sina.
Tsotra, tsy tia misehoseho ireo mpanefohefo any Suède, firenena any Eoropa avaratra. Tsy fantatra toy ny mahazatra any amin’ny firenen-kafa izy ireo, raha ny tatitra navoakan’ny mpanadihady vaovao momba ny toekarena any an-toerana. Mividy fiara tsotra ireo mpanankarena ireo, mandeha amina fiaramanidina “classe éco”, miditra any amin’ny tsena ahitana vidin-javatra mora, latsaky ny 50 %. Na fomba fitafin’izy ireo aza, faran’izay tsotra.
Nosazin’ny fanjakana any Afrika Atsimo mandoa lamandy roa tapitrisa euros ny orinasa Ford, mpanamboatra fiara any Etazonia. Ny fiarakodia Kuga novokarin’izy ireo any Afrika Atsimo, tsy nahafeno fepetra ara-teknika ka niteraka fahamaizan’ny fiara maherin’ny 40. Naharay fitoriana 160 momba ireo fiarakodia vokarin’ny orinasa Ford ireo ny vaomieram-pirenena momba ny mpanjifa any an-toerana, ka nitondra ny raharaha any amin’ny ambaratonga ambony. Niaiky tanteraka ny fahadisoany amin’izao asany izao ny orinasa Ford.